Vhidhiyo: Sliderocket Beta Inouya Munguva pfupi! | Martech Zone
Dzvanya kuburikidza kana iwe usaone vhidhiyo.
Mutsara: Waona PowerPoint yeMicrosoft. Asi hausati wamboona Internet-inogoneswa, yekudyidzana yekuratidzira chishandiso seSliderocket - kusvika zvino. Pano Mitch Grasso, CEO uye muvambi, anotiudza nezve Sliderocket iyo kambani uye ozotiratidza demo.
Sliderocket iri kugadzirira beta yeruzhinji munguva pfupi, saina nhasi.
Tags: muminyemail itsva makore zanokusimudzira chiitikoUkama Kushambadziramunyori 4torbittorbit njere
Yekupedzisira Chance Yekunyoresa: Hafu Yezuva Yekushandira Mangwana
Makambani anotendeukira kuInternational Social Networks
Jun 17, 2008 pa 12: 16 PM
SlideRocket inoshamisa. Ndiri kupa 2 mharidzo yakananga kubva kuSlideRocket mangwana kumusangano. Izvo zvinondibvumidza ini kubhuroka pakati peiyo online mienzaniso uye iwo masiraidhi zvakanyanya zvakanyanya (Ehe, ini ndinayo .pdf backup muGmail yangu uye pane flash drive kuti ndichengeteke!
Ini ndinogona kunge ndiri kutumira SlideRocket zvinongedzo kublog rangu mumashure vhiki rino mushure mekuratidzwa. Yakachena kwazvo interface.